बासलात : किन तयार गर्ने ? कसरी तयार गर्ने ? - Everest Dainik - News from Nepal
बासलात : किन तयार गर्ने ? कसरी तयार गर्ने ?
याे पनि पढ्नुस वासलात के हो ? किन र कसरी तयार गरिन्छ ?
वासलातको दायित्व पक्षमा हुने प्रमुख बुँदाहरु
तिर्नुपर्ने बिल (Bills Payable)
बैंक ओभरड्राफ्ट ( Bank Overdraft)
साहु ( Creditor)
ऋण ( Loan)
सुरक्षित कोष (Reserve Fund)
पुँजी ( Capital)
पुँजी फिर्ता (Drawings)
खुद नाफा (Net Profit)
खुद नोक्सान (Net Loss)
वासलताको सम्पती पक्षमा रहने प्रमुख बुँदाहरु
नगद मौज्दात (Cash in Hand)
बैंक मौज्दात ( Cash at Bank)
भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल ( Bills Receivable)
मोटर ( Motar)
भवन, हाता र पर्खाल (Business Premises)
अदृश्य सम्पतिहरु (Intangible Assets)
सामानको अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
वासलातमा समावेश हुने समायोजनका केहि कारोबारहरु
अन्तिम मौज्दात (Closing Stock)
पेस्की खर्च ( Prepaid Expenses)
भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ( Payable, Unpaid or Outstanding Expenses)
ह्रास ( Depreciation